Ester 2 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Akyiri yi, bere a Ɔhene Ahasweros+ bo dwoe kakra no, Wasti+ ho asɛm baa ne tirim, nea ɔyɛe+ ne nea wɔkae sɛ wɔbɛyɛ no no.+ 2 Afei nhenkwaa,+ n’asomfo no, kae sɛ: “Soma ma wɔnkɔhwehwɛ+ mmabaa, mmaabun+ a wɔn ho yɛ fɛ, mma ɔhene. 3 Ɔhene mpaw ananmusifo wɔ n’ahemman+ no afã nyinaa na wɔmmoaboa mmaabun ahoɔfɛfo ano, na wɔmfa wɔn mmra mmea fie wɔ Susan abankɛse+ mu mmɛhyɛ ɔhene piani+ Hegai+ a ɔhwɛ mmea so no nsa na ɔmfa nnuru nsrasra wɔn. 4 Na ababaa a ɔhene ani begye ne ho no nsi Wasti ananmu sɛ ɔhemmaa.”+ Ɔhene ani gyee asɛm no ho, na ɔyɛɛ saa. 5 Saa bere yi nyinaa na Yudani barima bi wɔ Susan+ abankɛse no mu a ɔde Mordekai+ a ɔyɛ Yair ba. Na Yair yɛ Simei ba, na Simei nso yɛ Benyaminni+ Kis ba. 6 Na Mordekai ka nnipa a Babilon hene Nebukadnesar+ faa wɔn nnommum+ fii Yerusalem kaa Yuda hene Yekonia+ ho kɔe no ho. 7 Ɔno na na ɔhwɛ+ ne papa nua ba+ Ester a na ɔde Hadasa no so, efisɛ na onni papa nni maame. Na ababaa no ho yɛ fɛ paa,+ na ne papa ne ne maame wu akyi no, Mordekai faa no sɛ ne ba. 8 Afei bere a ɔmanfo tee ɔhene asɛm ne ne mmara no, wɔboaboaa mmabaa pii ano baa Susan+ abankɛse no mu de wɔn bɛhyɛɛ Hegai nsa.+ Na wɔde Ester nso baa ahemfie hɔ bɛhyɛɛ Hegai a ɔhwɛ mmea so no nsa. 9 Bere a ohuu ababaa no, n’ani gyee ne ho na ɔpɛɛ n’asɛm,+ na ɔyɛɛ ntɛm srasraa+ no maa no nnuan pa. Afei oyii mmabaa baason fii ahemfie hɔ maa no, na ɔde ɔne mmabaa no kɔtenaa baabi pa wɔ mmea fie hɔ. 10 Saa bere yi nyinaa, na Ester nkaa ne man+ anaa n’abusua ho asɛm biara, efisɛ na Mordekai abɔ n’ano sɛ ɔnnka nnkyerɛ obiara.+ 11 Da biara Mordekai tu mpase kɔfa mmea fie no anim hwɛ sɛnea Ester ho te ne nea wɔde yɛ no. 12 Sɛ edu ababaa biara so a, ɔde ne ho kɔkyerɛ Ɔhene Ahasweros, bere a wɔasrasra wɔn asiesie wɔn asram dumien sɛnea nhyehyɛe a wɔayɛ ama mmea no te no. Ná wɔde kurobow+ ngo srasra mmea no asram asia na wɔde balsam+ ngo nso srasra wɔn asram asia, na wosiesie wɔn sɛnea ɛsɛ. 13 Saa na wɔyɛ ababaa no ansa na wakɔ ɔhene anim. Biribiara a ɔbɛka sɛ ɔpɛ no, wɔde ma no, na ɔde fi mmea fie hɔ kɔ ahemfie hɔ.+ 14 Sɛ ɔkɔ anwummere a, na anɔpa waba mmea fie a ɛto so abien no mu, nea ɛhyɛ ɔhene piani+ Saasgas a ɔhwɛ ayefam so no nsa no. Na ontumi nsan nkɔ ɔhene nkyɛn gye sɛ ɔhene no ani gye ne ho na ɔhyɛ da bɔ ne din frɛ no.+ 15 Afei bere a eduu Ester a ɔyɛ Mordekai nua Abihail ba, a Mordekai de no yɛɛ ne ba,+ so sɛ ɔba ɔhene nkyɛn no, wammisa biribiara+ gye nea Hegai+ a ɔhwɛ mmea no so no kae no; (saa bere yi nyinaa na obiara a obehu Ester no pɛ n’asɛm).+ 16 Ɛnna wɔde Ester kɔɔ Ɔhene Ahasweros nkyɛn wɔ ahemfie hɔ ɔsram a ɛto so du a ɛne Tebet no mu, n’ahenni afe+ a ɛto so ason mu. 17 Ná ɔhene no dɔ Ester sen mmea a wɔaka no nyinaa, enti onyaa anuonyam ne adɔe wɔ n’anim sen mmabaa a wɔaka nyinaa.+ Ɛnna ɔde abotiri bɔɔ no yɛɛ no ɔhemmaa+ sii Wasti ananmu. 18 Afei ɔhene tow ne mmapɔmma ne ne nkoa pon kɛse bi, Ester apontow; na ɔmaa aman a wɔhyɛ n’ase no mufo nyaa ahofadi,+ na ɔkyekyɛɛ nneɛma pii sɛnea ɔhene betumi biara. 19 Bere a wɔboaboaa mmaabun+ no ano ne mprenu so no, na Mordekai te ɔhene no pon ano.+ 20 Saa bere no nyinaa na Ester nkyerɛɛ abusua ne ɔman a ofi mu+ sɛnea Mordekai+ hyɛɛ no no;+ Ester yɛɛ nea Mordekai kae nyinaa te sɛ bere a na ɔte ne nkyɛn no.+ 21 Bere a na Mordekai te ɔhene pon ano no, Bigtan ne Teres a wɔyɛ ahemfie mpanyimfo a wɔhwɛ pon no ano no bo fuwii na na wɔrepɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akum+ Ɔhene Ahasweros. 22 Mordekai tee asɛm no, na ntɛm ara ɔkɔbɔɔ Ɔhemmaa Ester amanneɛ.+ Ester kaa ho asɛm kyerɛɛ ɔhene wɔ Mordekai din mu.+ 23 Wɔhwehwɛɛ asɛm no mu huu biribiara, na wɔsɛn+ wɔn baanu wɔ dua so.+ Eyi akyi no, wɔkyerɛwee wɔ wɔn bere so nsɛm nhoma mu+ wɔ ɔhene no anim.